သနပ်ခါးမေ: ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက် ပို့စ်
ချောကလက်ကျူးပစ်လေး February 16, 2012 at 3:04 AM
မိစံ February 16, 2012 at 3:22 AM
မြတ်ကြည် February 16, 2012 at 3:28 AM
ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖုန်းနဲ့ လှည့်ရိုက်လိုက်တာ မိစံရေ။ အဲလို။ :)
မေမြို့မိုး February 16, 2012 at 4:01 AM
မုန့်တွေစားကြည့်ချင်တယ်. ဟဟ.အစ်မရေ. အောက်ဆုံးက
သက်ဝေ February 16, 2012 at 4:40 AM
ဒီညီမလေးက မုန့်လှလှလေးတွေလည်း လုပ်တတ်တာကိုး... တော်လိုက်တာ...း)
မဒမ်ကိုး February 16, 2012 at 6:29 AM
မင်းသမီး တင်တာနောက်ကျတယ် သစ်ထူးလွင်မှာရှိတယ်
ဟိဟိ အစကအိပ်ငိုက်နေတာ နောက်မှကောင်းမှန်းသိတယ် မြတ်ကြည်ရယ် ...
Candy February 16, 2012 at 7:22 AM
မြတ်ကြည်ရေ.. အဲ့ပေါက်ပေါက်တွေ တယောက်တည်း ကုန်လို့လား ကြည့်လည်းလုပ်ဦး ဟိဟိ :D
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) February 16, 2012 at 7:38 AM
ကျေးဇူးပြု ၍ သားသားလေးကို မြတ်ကြည်ပုံ ပြပါ...၁၀မှတ်... ဘူလဲကွ မြတ်ကြည်ဆိုတာ..မောင်တလုံးတဲ့..ငှဲငှဲငှဲ
ကိုရင် February 16, 2012 at 9:16 AM
မြတ်ကြည်ကို မဒမ်က ဘာတွေ ကျိတ်ခိုင်းနေတာတုန်း.:D
ကြက်ဥစားလိုက် ကျောင်းရောက်လိုက် ၀ါးဟောက်လိုက်နဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်မဟုတ်ဘူး.. ဟိုရောက်ဒီရောက် အစစ်ဗျ :D
မွေးနေ့မတိုင်ခင် မုန့်တွေကြိုလုပ်ကျင့်ရင်းအမြည်းတွေကျွေးနေတယ်ပေါ့လေ...း)
ဘရဏီ February 16, 2012 at 1:16 PM
အဲ့ ဒီကားကြည့် ပြီးပြီ ။ အရမ်း အရမ်းကိုကြည့် လို့ ကောင်းတယ်။ :)
ချစ်စံအိမ် February 16, 2012 at 2:03 PM
မြတ်ရေ မုန့်လုပ်လေစားချင်တယ် ဂလု သူရေသံနော်
မြတ်ကြည် February 16, 2012 at 3:33 PM
မေမြို့မိုး << ရှာကြည့်ကြည့်၊ မြင်းက ဇာတ်တော်တော်နာတယ်။ အစ်မ ကြည့်ရင်း မျက်ရည် ဝဲတဲဝဲတဲနဲ့
အစ်မသက်ဝေ << မတော်ပါဘူးအစ်မရယ်၊ ဘီဂင်နာလေးပါ။ မလှတာတွေ အကုန် ဗိုက်ထဲထည့်ပြီးမှ ရိုက်တာလေ :D
အစ်မဒိုး << ဟုတ်လား? မတင်တော့ပါဘူး။ ကြိတ်ထားဆိုလို့ ကြိတ်လိုက်ဦးမယ်။
ကန်ဒီရေ၊ နှစ်ယောက်စားတာ မကုန်ဘူး၊ များဆို ညစာတောင်မစားနိုင်တော့ဘူး။
မောင်တစ်လုံး <<သွတ်သွတ်.. ဟန်ဂျီအင်းကိုမရလည်း တခြားသူရှာပေးပါမယ်။ မဂေါက်လိုက်ပါနဲ့ :D
ကိုရင် << မဒမ်က ဆီကြိတ်ခိုင်းနေတာ (ပဲ ကနေ ဆီထွက်အောင်) :P
အစ်မကမ်မိုမီလာ << ကြက်ဥပူတင်း ကြိုက်ရင်များများစားသွားနော်။
ဘရဏီလေး << ဟုတ်တယ်၊ အစ်မလည်း ကြိုက်တယ်။ ရသစုံပဲ။
အစ်မလမင်း << ညီမ လင့်ခ် လေးတွေ ချိတ်ထားတယ် အစ်မ။ အချိန်အားရင်လုပ်စားကြည့်လို့ရတာပေါ့။ :)
san htun February 16, 2012 at 4:24 PM
အိဟွာ တက္ကသိုလ်ကြီးကို ကိုရီးယားကားတွေမှာ တွေ့ ဖူးတယ် ထင်တယ်..ရမ်းတုတ်သွား၏ :D
Vista February 16, 2012 at 4:33 PM
ဘယ်မလဲပေါင်တံသွယ်တာ မရိုက်လာခဲ့ဘူးလား ဟိဟိ
နွေလ February 16, 2012 at 11:36 PM
ခေါင်းစဉ်က ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ပို့စ် တဲ့
အစ်မမြတ်ကြည်ရေ . . .
နော်က Movie Crazy ဗျ
ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လည်း နှိုက်စားသွားတယ် :P
မြတ်ကြည် February 17, 2012 at 1:19 AM
မပြောတတ်ဘူး၊ အစ်မစန်းထွန်းရေ၊ တချို့တက္ကသိုလ်တွေက ခပ်ဆင်ဆင်ရယ်။
Ma VIst << ပေါင်တံက ရိုက်ခဲ့ရမှာ၊ သူတို့ လုံလုံခြုံခြုံဝတ်နေကြတော့ မရိုက်လာခဲ့ရဘူး။ :D
ဟိုနည်းနည်း၊ ဒီနည်းနည်း နဲ့ ဘာခေါင်းစဉ်ပေးရမှန်းမသိတော့လို့ ငါ့မောင်ရေ။
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) February 17, 2012 at 7:48 AM
ဝက်သားကြက်ဥအဆာသွပ်လေးက စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိုက်တာ ..
စားလို့လည်းကောင်းမှာ သေချာတယ်နော်။ ကြည့်တာနဲ့ အရသာရှိတာ သိသာတယ်..
မြတ်ကြည်လေးကချည်း ချစ်စရား)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! February 17, 2012 at 11:12 AM
လက်ရာလေးတွေက စားချင်စဖွယ်ပဲ မြတ်ကြည်...
Rita February 17, 2012 at 6:05 PM
ပန်းချီ February 19, 2012 at 3:53 AM
ကြက်ဥပြုတ်စားချင်သွားပြီ မျက်ကျိး))
မောင်မောင် February 23, 2012 at 11:24 PM
ဒီပို.စ်ကပုံတွေက ဇတ်လမ်းထည်းက မင်းသမီးလား။ တော်တော်ချောတယ်နော်။ မင်းသမီးချောလို .ဇတ်ကားကိုကြည်.လိုက်အုန်းမယ်-:P